, छोएर नाटकीय, Patriotism भरिएको - सबै WWII बारेमा एउटा चलचित्र बारे भने गर्न सकिन्छ। रूस र सोभियत संघ को अन्य देशहरूमा चलचित्र, ठूलो साहस देखाएका छन् र मर्यादा भयानक पटक सहेका गर्ने नायक को धेरै हटाइयो। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध बारे के फिलिमहरु गएर लायक छन्? र सबै भन्दा 40 औं को सैन्य जीवनको चित्र दर्शक प्रभावित के?
दोस्रो विश्व युद्ध बारेमा फिलिम: "यहाँ Dawns शान्त हुनुहुन्छ"
जो पाँच जवान महिला स्वयंसेवकहरु को यो हृदयस्पर्शी कथा जो सोह्र राम्रो प्रशिक्षण जर्मन जासूस सामना गर्न प्रयास गरेका थिए थाहा छैन? कम से कम, सोभियत पटक मा, चित्रकला को कथा "यहाँ Dawns शान्त हुनुहुन्छ" सबैलाई हृदय द्वारा थाह थियो।
को करेलियन रेल sidings को एक निकट, सोभियत सेना को स्थान नजिकै जर्मन diversionists देखिन्छन्। रेलवे जंक्शन गार्ड सर्जन्ट Fedot Vaskov र स्वयंसेवक महिलाहरु आफ्नो समूह।
Vaskov आफ्नो subordinates पाँच सर्वश्रेष्ठ लाग्छ र saboteurs तिर विस्तार। तर यो बाहिर जान्छ अब दुई, तर सोह्र जर्मन छ। त्यो एक दलदल मा एक निरर्थक दुर्घटना द्वारा हत्या, मद्दत को लागि बाहिर पठाए। अरूको संख्या उच्च विरोधीहरूले मार्न। Fedot Vaskov, द्वारा र ठूलो छ, त्यसैले अझै पनि बाँच्न बस्ने आफ्नो खेलाडीहरू, हराउछ। तथापि, बलिदान व्यर्थमा थिएन: को मोड अझै पनि रोक्न सम्भव छ।
यो सामान्यतया दोस्रो विश्व युद्ध बारे एउटा राम्रो चलचित्र समाप्त हुन्छ: यसलाई भविष्यको लागि आशा को एक थोपा दिन्छ र हामी अब के बुझ्न बनाउँछ।
"केही पुराना मान्छे लड्न जानुहोस्"
दोस्रो विश्व युद्ध बारेमा फिलिम, सोभियत सिनेमा को सुनको संग्रह प्रविष्ट -, यो एक नाटक हो "केही पुराना मान्छे लड्न जाने", Leonidom Bykovym orchestrated।
यो समय कार्य कहीं पनि युक्रेनी सीमाना हस्तान्तरण गरिएको छ। बस युक्रेनी SSR मुक्ति लागि लडिरहेका जानुहोस्। तस्विर मुख्य वर्ण - दैनिक परिवहन र शत्रु को रणनीतिक लक्ष्य आक्रमण प्रतिबद्ध जो लडाकु पाइलटहरूले। को जंगी जहाजको टोली को मुख्य - को optimist र अथक prankster कप्तान Titarenko। उहाँलाई भर्खरै स्कूल समाप्त भएको थियो जो केटाहरू, को पूरा आउँछ। र जंगी जहाजको टोली कमान्डर तिनीहरूलाई लडाकूको तालिम ठूलो प्रयास हुनेछ।
फिल्म प्रकाश हास्य, सुन्दर गीतहरू, तर, पाठ्यक्रम, नाटकीय घटनाहरू छैन बिना भरिएको छ। त्यहाँ एक पनि युद्ध आत्मा मा समाप्त भयो, रोमान्टिक इतिहास लागि ठाउँ थियो: त्यो र त्यो लगभग एक दिन मा मृत्यु भयो।
"द battalions आगो गर्न आग्रह गर्दै"
दोस्रो विश्व युद्ध, धेरै केही मानिसहरू indifferent छोड्न जो बारेमा अर्को फिलिम - यसलाई "battalions आगो गर्न आग्रह गर्दै" एक युद्ध फिलिम छ। यो फिल्म, ओलेग Efremov, रूपमा सोभियत सिनेमा यस्तो तारा, अभिनय गर्ने कलाकार अलेक्जेन्डर Zbruev, Nikolai Karachentsov र इगोर Sklyar।
यो फिलिम को कार्य समयमा ठाँउ लिन्छ को Dnieper पार कीव को दक्षिण। को 85th रेजिमेन्ट को battalions एक पछि आक्रमण लागि प्रयोग गरिने एक foothold, लड्न लिन आदेश दिए। तर, मानिसहरू लडाइँ र आदेश योजना मा पायो जब नाटकीय परिवर्तन र तोप आगो अन्यत्र डाईभर्ट भयो। त्यसैले सिपाहीहरूले आगो आवरण बिना जर्मन संग एक्लै छोडेर क्रम उहाँलाई पूरा, पछिल्लो लडे थिए।
"वसन्त को सत्र क्षणहरू"
दोस्रो विश्व युद्ध बारेमा फिलिम, साँच्चै प्रतिष्ठित भएको छ - यो पक्कै पनि एक जासूस तस्वीर छ "स्प्रिंग को सत्र क्षणहरू।" फिल्म 12 एपिसोडको हुन्छन्। यो घटनाहरू निरंतर विकसित गर्दै छन्, तर यो कथा कुनै कम रोचक छ।
तातियाना Lioznova द्वारा निर्देशित यो परियोजना भेला सोभियत सिनेमा को सबै रंग: Vyacheslav Tikhonov र Leonida Bronevogo, प्रणय Gaft र ओलेग Tabakov, Ekaterinu Gradovu र LVA Durova, एव्जेनी Evstigneev, र अन्य धेरै प्रतिभाशाली अभिनेता।
कार्य जर्मनी मा स्थान लिन्छ। नाम Maksa ओट्टो Stirlitz अन्तर्गत लुकाएको एक सोभियत जासूस, - हिटलर नजिक सर्कलमा, त्यो "तिल" थाले। रूसी बुद्धि सेना शर्त जानकारी पारित वा कब्जा सोभियत जासुसहरूलाई बचत गर्ने प्रयास हरेक समय, Stirlitz धेरै जोखिम। तर आफ्नो प्राकृतिक धूर्त र धीरज मद्दत Standartenfuehrer unscathed जानुहोस्।
"युद्ध बिना बीस दिन"
एक प्रतिभाशाली लेखक Konstantin Simonov एक पटक नायक जो एक सामान्य थियो हृदयस्पर्शी लिपि, सिर्जना सैन्य पत्रकार मेजर Vasily Lopatin। फिल्म यो परिदृश्य को बोध लागि, निर्देशक 1975 मा लिए Alexei जर्मन। त्यसैले एक फिलिम "बीस दिन युद्ध बिना", जसमा अभिनय गर्ने कलाकार यूरी Nikulin र Lyudmila Gurchenko।
तस्विर बीस खुसी दिन शत्रुता बीचमा विनियोजन गरिएको जो छन् एक सैन्य पत्रकार Lopatin छुट्टी, को कथा बताउँछ। तुलसी ताशकहरुट, जान्छ जहाँ आफ्नो साथीहरु र परिचितहरू कि निकासी मा हो, र जहाँ जसको लिपि Lopatin द्वारा लेखिएको थियो सामने मा फिलिम, को शूटिंग। टेप कहिलेकाहीं अविश्वसनीय भोक अनुभव र अगाडि को आवश्यकता सुनिश्चित गर्न एक दिन 24 घण्टा कारखाना मा काम गर्दै छन् जो निकासी मानिसहरूको जीवनमा बारेमा प्रभावशाली विवरण भरिएको छ।
"ब्रेस्ट किल्ला" - आधुनिक निर्देशक Aleksandra Kotta, नाम रूपमा 2010. मा जारी सिर्जना निर्देशक जुन 1941, जर्मन सोभियत संघ को सीमाना गर्न marched जब आफ्नो चित्रकला घटनामा हाइलाइट गर्न प्रयास छ अनुमान गर्न सजिलो छ। पहिलो र सबैभन्दा शक्तिशाली झटका को ब्रेस्ट गढ भनिन्थ्यो एक जो फ्रंटियर पोष्ट, मा परे। आफ्नो स्थिति रक्षा गर्न प्रयास, को नाकामा मा तैनात सबै सैनिकहरू reinforcements लागि प्रतीक्षा, मृत्यु भयो।
फिल्म, जस्तै चिरपरिचित अभिनेता अभिनय गर्ने कलाकार , पावेल Derevyanko, एन्ड्रयू Merzlikin र Yevgeny Tsyganov।
शायद सबैभन्दा रोचक चलचित्र - दोस्रो विश्व युद्ध बुद्धिको बारेमा एक फिलिम। टिभी च्यानल शट "रूस-1" यो विषय मा उपन्यास Anatoliya Azolskogo आधारमा आश्चर्यजनक साहसिक को अनुहार मा आधुनिक रूसी टेलिभिजन। हामी फिलिम "Saboteur" बारे कुरा गर्दै छन्।
यो फौजको जाचबुभ्क कप्तान Kaltygina तीन लडाकूको निर्वाचकगण - यो साहसिक श्रृंखला को protagonists। यसको इतिहास, यसको आफ्नै अद्वितीय वर्ण - बच्चाहरु को प्रत्येक। तर सँगै तिनीहरूले सबैभन्दा कठिन कार्यहरू पठाइएको र एक एकाइ रूपमा कार्य गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। फिल्म अभिनेता व्लादिस्लाव Galkin को सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन को एक हो।
दोस्रो विश्व युद्ध बारे वृत्तचित्र फिलिमहरु
दोस्रो विश्व युद्ध बारे वृत्तचित्र फिलिमहरु लगभग हरेक वर्ष हटाइएको छ। तर, विभिन्न देशका टीभी च्यानल आफ्नै एउटै घटना तरिकामा व्याख्या गर्ने प्रयास। टिभी च्यानल "स्टार", सैन्य मुद्दाहरू मा माहिर जो को उल्लेखनीय वृत्तचित्र काम सबै विशेष रोचक र सूचनात्मक छलफल परियोजनाहरू बीचमा।
Sam विनचेस्टर - टिभी श्रृंखला को वर्ण "अलौकिक"
सामान्य एनेस्थेसिया - यो के हो? एनेस्थेसिया को प्रकार। एनेस्थेसिया लागि तयारी
Percale, यो सामान के हो?
A देखि Z सम्म नवजात केटीहरु को स्वच्छता
स्वस्थ बोट र बाली प्रारम्भिक प्राप्त गर्न स्ट्रबेरी transplanted गर्दा
पेट्रोल घास काटन मिसिन: प्रयोग विशेषताहरु
भ्रमण "बुल्गारिया सनी बीच" - मनोरञ्जन, आराम, यात्रा।